Samsung Galaxy Note 7 bụ eziokwu ... mere ukara | Akụkọ akụrụngwa
Joaquin Garcia | | Ihe omume, Mobiles
Ihe omume Samsung na-eme ugbu a ebe ụlọ ọrụ Korea na-eweta ngwaahịa ọhụrụ ya. Ngwaahịa nke ụfọdụ n'ime anyị amaghị ma na ndị ọzọ na-echerịrị, dị ka ama ama Samsung Galaxy Note 7. Ihe ọhụrụ Samsung phablet bụ ugbua eziokwu na anyị niile maara nakwa na Samsung emewo ka ọ bụrụ onye ọchịchị, ma ọ bụ n’ụzọ pụtara ìhè dịka anyị pụrụ ịhụ.
Na omume a akpọbeghị ngwaọrụ ruo ọgwụgwụRuo mgbe ahụ, enwere mkparịta ụka zuru ezu banyere ihe na atụmatụ nke Samsung ọhụrụ a nwere, na-aga ọrụ ya na ọbụna na-ekwu maka ngwa ndị nwere ike ịnweta nke phablet ga-enwe. Ozugbo emechara nke a, CEO nke Samsung webatara nke ọhụrụ Samsung Galaxy Rịba ama 7.
1 Samsung Galaxy Rịba ama 7 nkọwa
2 Nchebe, isi ihe siri ike nke Samsung Galaxy Note 7
3 Emeela ka obodo kwụụrụ onwe ya dịkwuo mma site na USB-C na nnukwu batrị ọhụrụ ya
4 Mmetụta mbụ nke Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ a
Samsung Galaxy Rịba ama 7 nkọwa
Samsung Exynos 8890 na 2,3 Ghz.
4 Gb nke ebule
5,7-anụ ọhịa SuperAMOLED ihuenyo na 2.560 x 1.440 pixel mkpebi.
64 Gb nke nchekwa dị n’ime nke nwere ike ịgbasa ruo 256 Gb site na oghere microsd.
Batrị 3.500 mAh.
gam akporo 6
12 MP n'azụ igwefoto na ngwa anya image stabilizer na f / 1.7 aperture
5 MP n'ihu igwefoto.
Mmiri na-eguzogide ọgwụ, ruo 1,5 m. Nkeji 30.
Ihuenyo gbagọrọ agbagọ.
Mma S-Pen nke nwere mkpirisi abuo nke na ejikọ aka na Galaxy Note 7.
4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz), NFC, Iris nyocha, Mkpisiaka mmetụta na USB-C
153 x 73.9 x 7.9mm na 169 gr.
Nchebe, isi ihe siri ike nke Samsung Galaxy Note 7
Ọhụrụ Samsung phablet ga-enwe kacha nchedo nke dị ugbu a n'ahịa. Nche a abụghị nanị na-enye site na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke ngwaọrụ nwere kamakwa site na iris nyocha nke gụnyere Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ ahụ ga-adabakwa na ngwa ọrụ nchekwa nke ngwaọrụ ndị ọzọ na gam akporo 6 na gam akporo 7. ga - dakọtara na mgbakwunye. nwere ike ịchekwaa akwụkwọ ọ bụla nke ga-adị mma n'aka ndị bịara abịa na ọnụ ya site na nzuzo ya dị elu na teknụzụ nchekwa ọhụụ, Samsung Pass. Anyị nwere ike ịnweta naanị ebe a site na iris nyocha, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na koodu ejiri na S-Pen.
Samsung Galaxy Note 7 na-ekwusi ike nke Samsung Galaxy S7 Edge, atụmatụ nke na-abịa na ihuenyo nwere akụkụ abụọ ma na nke a anyị nwere nnukwu ihuenyo, ihe ngosi ngosi 5,7 nke di elu. Ihuenyo a ga - enwe ezigbo enyi, S Pen ọhụrụ ga - eme ka ndị nwe ngwaọrụ a ghara ịgbanwe agbanwe. Ka ọ dị ugbu a, a gbanwere S Pen ọhụrụ ruo n'ókè nke na-esi na 1,7 mm na ọkpụrụkpụ nke ọkpụrụkpụ ruo 0,6 mm n'ogo. Na mgbakwunye, naanị site na imetụ ihuenyo ahụ, S Pen ọhụrụ a ga-arụ ọrụ Atụmatụ ọhụrụ na TouchWiz na Samsung Galaxy Note 7. Ọtụtụ ekwuola banyere ọhụụ ọhụrụ ọ dị ka ọ dị na Samsung Galaxy Note 7 a anyị ga-enweta ya n'ụzọ zuru oke, ya bụ, ọ ga-adị n'ụdị niile na ụdị dị iche iche nke Samsung Galaxy Note 7. O di nwute na anyi enweghi ihe obula ekwe omume ekwe nke stylus, ọ bụ ezie na anyị ahụwo na ọ nwere ike na-arụ ọrụ dị ka a na-akwado ndị phablet.
Ihe ohuru nke Samguns Galaxy Note 7 na-ewetara nso bu mgbochi mmiri na ụdị ndị ọzọ nke ezinụlọ S7 nwere yana nke a Nkọwa na-ewetakwa ya, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ otu asambodo nke Samsung Galaxy S7 Edge nwere ugbu a, ya mere ọ gaghị adị mmiri dịka ụfọdụ ndị ọrụ ga-achọ. Samsung ekwughị ihe ọ bụla banyere ya, mana otu n'ime ule mbụ nke ngwaọrụ a ga-agabiga ga-abụ asambodo IP68 Ọ dị mma, ọtụtụ ndị nwere Galaxy S7 Edge enweghị obi ụtọ na mgbochi mmiri nke ngwaọrụ ha.
Ọ bụghị naanị na azụmaahịa a ka a ga-eji kwado ya. Ọ ga-abụ ngwaọrụ maka ntụrụndụ ebe S Pen nwere ike ịrụ ọrụ dịka nkwado maka ngwaọrụ ahụ, ihe a na-ekwu ọtụtụ okwu na Samsung gosipụtara naanị na "ịgafe" na ngosi ahụ, mana ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ. Galaxy Note 7 ga-enye HDR na onyonyo ya, nnukwu egwuregwu vidio na Vulkan ndakọrịta. Banyere igwefoto, ngwaọrụ ọhụrụ a enweghị otu igwefoto dị ka Samsung Galaxy S7 Edge mana na-enye igwefoto ka mma yana mkpebi dị elu na onyonyo ahụ. Nke a na-eme ka ngwaọrụ chọrọ nnukwu nchekwa dị n'ime. Ya mere ohuru Samsung Galaxy Note 7 nwere 64 GB nke nchekwa dị n'ime ọ nwere ike gbasaa ruo 256 Gb site na oghere microsd nwere.
Emeela ka obodo kwụụrụ onwe ya dịkwuo mma site na USB-C na nnukwu batrị ọhụrụ ya
Ikuku ikuku ma ọ bụ nnwere onwe bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị. Samsung Galaxy Note 7 nwere otu eriri-C mmepụta nke ahụ ga-ekwe ka ụgwọ ngwa ngwa mana anyị nwekwara ike ịgbanwe maka ikuku ikuku. N'ọnọdụ ọ bụla anyị nwere batrị 3.500 mAh nke ahụ ga - eme ka anyị chefuo ịkwụ ụgwọ mobile maka oge ụfọdụ. Ngwa ngwa ngwa nke ngwaọrụ a ka bụ Ndenye Nchaji 2.0, teknụzụ Qualcomm na-abaghị uru mana nke ahụ na-enye nsonaazụ ọma na Samsung Galaxy S7 yana a na-atụ anya nnukwu ihe na ọhụụ ọhụrụ a ebe ọ bụ na onye a nwere ọdụ ụgbọ USB-C na Galaxy S7 adịghị.
Ihe ohuru Samsung Galaxy Note 7 agaghị echere IFA na Berlin mana ọ ga-abata na ahịa tupu nke ahụ, kpọmkwem na-esote August 19, ọ bụ ezie na anyị amabeghị ọnụahịa nke Samsung ọhụrụ a ga-enwe.
Mmetụta mbụ nke Samsung Galaxy Note 7 ọhụrụ a
Onye ọ bụla tụrụ anya na ọtụtụ ihe ga-esi ọhụrụ a phablet, ọ bụghị n'efu Samsung n'onwe ya awụgharịwo nọmba, nke ọ chọrọ ka ọ bụrụ ihe nlereanya ka mma, ma dị ka ọtụtụ dọrọ aka ná ntị, Samsung Galaxy Note 7 ka bụ vitaminized Samsung Galaxy S7 Edge. A phablet na-agụnye ụfọdụ ihe Samsung ga-etinyerịrị na Galaxy S7 Edge dị ka ọdụ ụgbọ USB-C ma ọ bụ nyocha iris. N'ọnọdụ ọ bụla, o doro anya na ruo ugbu a, echere m na Samsung Galaxy Note 7 ga-abụ ngwaọrụ nke ga-eju ọtụtụ mmadụ anya, ọ bụghị naanị maka arụmọrụ ọ ga-ekwe omume kamakwa maka ihe ndị ọzọ, ihe ga-eme ka anyị chefuo maka 6 Gb nke ebule nke ahụ enweghị 4.000 mAh batrị Enweghi ya ma obu S Pen nke na-echi… .Elements nke otutu gha agha ma anyi agaghi ahu, opekata mpe ihe nlere a. Mana ajụjụ kachasị ụjọ ma ọ bụ eziokwu maka onye ọrụ ikpeazụ ga-abụ Ego ole ka Samsung Galaxy Note 7 ga-adị? Y Ọ bara uru na ọnụahịa dị n'etiti Galaxy Note 7 na ngwaọrụ ndị ọzọ nke Samsung ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka na ahịa? Kedu ihe ị chere?
Ihe ohuru Samsung Galaxy Note 7 ga-aga ere maka euro 849, dị elu karịa ma ọ bụrụ na anyị na-ezo aka na dollar, nke ga-abụ ego anyị nwere ike ibu ụzọ zụta phablet a. Banyere ihuenyo ahụ, na nke a, ọ ga-eji Gorilla Glass 5 ọhụrụ, teknụzụ nke ụdị Samsung ndị ọzọ anaghị eji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Samsung Galaxy Note 7 bụ eziokwu ... mere ukara
Ndị ọrụ Windows Phone na-arịọ maka Pokémon Go maka ekwentị ha